Union GeForce 7800 GS futhi Windows Vista
With ukukhululwa kwe-GeForce 7800, i-NVIDIA wenabisa uhla imikhiqizo yayo, ogxile emsebenzini ngokuhlanganyela uhlelo lokusebenza le-Windows Vista.
Nvidia GeForce 7800 GS has izici ezilandelayo:
Usekela Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0 ashukumisayo ipharamitha ye ngeso ukukhanya imiphumela ephezulu ukusebenza ngokuphelele ngamathoyizi zanamuhla.
i-oyisizukulwane sesithathu Nvidia bokwakha elungiselelwe ukusebenza nge Windows Vista kanye iye ngqo eyenzelwe engcono isipiliyoni umsebenzisi 3D isikhombimsebenzisi sokuqhafaza we OS esizayo.
Nvidia PureVideo ubuchwepheshe kwenza sokudlala ephezulu definition video, izithombe ezicacile and smooth and olunembile umbala reproduction.
yokuthengisa Global of NVIDIA GeForce 7800 GS AGP uzoqala ngoFebhuwari 6, 2006. Ngokusho abamele NVIDIA inkampani, i-GeForce 7800 GS kuhloswe abasebenzisi nge subsystems AGP, okwakuyoholela Yandisa amandla ohlelweni lwakho. Ngokusho analysis, lokhu kuzokwenza oyisibonelo abe hit ikakhulukazi enkulu phakathi gamers, asebenesikhathi eside elinde ikhambi elinjalo kusukela NVIDIA.
Abanikazi GeForce 7 series video amakhadi akudingeki ukuba uchithe imali eningi ukuze kuthuthukiswe izinhlelo zabo. Bayoba akwazi ukuthenga GeForce 7800 GS, ngokuphawulekayo okwandisa amandla imishini yabo futhi ukunweba ukuphila kwabo.
Windows 10 bayoba editions eyisikhombisa
kanjani I khipha Windows 7?
Kanjani I udlulise amafayela disk in Windows 8
Kwafika lokusebenza lokuqala emhlabeni Windows